Phenduka Ikhamera: Uhlelo lweDolly lwe-iPhone yakho noma i-DSLR | Martech Zone
Phenduka Ikhamera: Uhlelo lweDolly lwe-iPhone yakho noma i-DSLR
NgoLwesibili, Agasti 6, 2013 NgoMsombuluko, Agasti 5, 2013 Douglas Karr
Sibhale nge- imishini eyisisekelo yokuqopha ividiyo wonke amabhizinisi kufanele abe nawo uma efisa ukurekhoda amavidiyo ekhwalithi yebhizinisi lawo. Uma uke wabuka ividiyo yekhwalithi ye-studio, kodwa, uqaphele amasistimu wethrekhi nama-dolly abawasebenzisayo ukuhlinzeka ngamashothi weselula ahlukile, abushelelezi.
Ngama- $ 99, manje usungaba ne- Phenduka uhlelo lwekhamera ye-Dolly nge-DSLR yakho noma nge $ 139, i-smartphone yakho. Nasi ukubuka konke okuhle komkhiqizo nohlobo lwamashothi ozokwazi ukuwenza. Banezesekeli ezimbalwa - noma banesistimu yethrekhi ongangeza kuyo!
Ngokusho the Phenduka Ikhamera isayithi:
Ikhamera ye-Revolve dolly iyisiteji sokuthwebula izithombe ezibushelelezi nezishukumisayo. Lolu hlelo lungenza izibhamu ezahlukahlukene zokulandela ngomkhondo kanye nama-rotary shots shots kanye nokuhamba kwesikhathi okunamandla nokumisa ukuthwebula izithombe. Ihambisana cishe nanoma iyiphi ikhamera, futhi ilungele ukusetshenziswa kuzo zonke izindawo nakunoma iyiphi indawo.
Ama-ekseli angaguquguquka avumela idoli ukuhamba ngomugqa oqondile, noma ku-arc ejikelezayo yanoma iyiphi i-engeli. Uhlelo lufaka ikhithi yesitimela evumela ukuthi idoli lisetshenziswe kunoma iyiphi indawo ukuthola ividiyo ebushelelezi ngisho nasezindaweni ezimbi. Faka owakho amapayipi / izinduku ukudala ithrekhi yesilayidi yanoma yibuphi ubude! Ucingo ngalunye lukalayini lucijile ukwamukela intaba enxantathu ukuze ukwazi ukusebenzisa ujantshi kunoma yikuphi ukuphakama, noma udale ukuthambekela noma ukwehla imidwebo yesilayidi.
Ikhalenda Lokumaketha Nge-imeyili lika-2013
Ingabe Ibhizinisi Lakho Kufanele Libe Ku-Pinterest?